Barcelona oo dooneysa inay iibiso mid ka mid ah xidigaha uu ugu jecelyahay Ernesto Valverde – Gool FM
(Spain) 31 Maarso 2019. Barcelona ayaa diyaar u ah inay kaga takhalusto adeega mid ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan suuqa xagaaga ee soo aadan, qiimo dhan 43 milyan ginni.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday, in Barcelona ay aqbali doonto inay iska iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Croatia Ivan Rakitić, hadii ay ku hesho qiimaha ay ku dooneyso.
Sida ay wararku xaqiijiniyaan Inter Milan iyo Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha ugu cad cad ee xiiseenaya adeega Ivan Rakitić.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii uuu macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho oo lala xiriirinayo kooxda Inter Milan uu sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe reer Croatia ee Ivan Rakitić uu ka mid yahay xidigaha khadka dhexe ee aduunka ugu fiican.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in kooxda Barcelona ay kula soo wareegtay aduun dhan 70 milyan oo ginni da’ayarka kooxda Ajex ee Frenkie de Jong, isla markaana ay doonayaan lacago kale ee dheeraad ah si ay u sameeyaan saxiixa Antoine Griezmann, sidaas darteed kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa dooneysa iibinta Rakitić.
Warar hore ayaa sheegayay in xidiga khadka dhexe ee reer Croatia ee Ivan Rakitić, uu ka mid yahay xidigaha uu ugu jecel yahay Ernesto Valverde, marka loo fiiriyo kuwa ku sugan garoonka Cump Nou, wuxuuna si weyn u doonayaa inuu sii joogo kooxda reer Catalonia.